[Ankapobeny ] 19 Aogositra, 2009 13:18
Vali-tagy ny simplex
Io ny anao ra simp a! tena marina ve lety ity sa mba mampiresaka ry zalahy! lol
Mitovy @ Madonna sy Eddie Murphy zany ny ady kle ko
na koa le bandy kelity @ sary ahetsika
Fehiny zany de mety bandy mahay mampime a zany no sady be resaka kanefa koa tsy mivakiloha.
Misaotra @ simplex nanome tagy
[Ankapobeny ] 12 Aogositra, 2009 08:23
Izay tsy nanota t@nareo no aoka hitoram-bato azy voalohany!!! Olombelona tokoa isika ka samy manana kilema ka tokony hahay hifamela heloka na toy inona na toy inona eloka mety ho vita ny namana t@tsika. Ary mazava ny teny ny Tompo nanao oe raha hivavaka ianao dia mandehana aloha mamitram-piavanana @ namanao!!! Miarahaba ny mpitarika ny firehana efatonta ny tenako t@ fahavitan'ilay fifanarahana tany Maputo farany teo. Niniko tsy nilaza hevitra mihitsy raha tsy tena nahita maso ilay sonia vita @ fifanarahana ny tena.
Mila fanetren-tena @ tsirairay io ka mila mahay mifandefitra sy mifamela heloka raha tena tiana ny hisiny fihavanana tena izy marina. Mazava ny tenin'ilay mgr Felix Ramananarivo evekan'Antsirabe nanao oe: "Fahavalom-pirenena izay mikiry manilikilika ny hafa tsy misy marina eto hoy izy ka tokony hahay hifamela"!!! Taratra anefa fa mbola misy fikizirana hanilika an'i Ravalomanana ny firehana Rajoelina ankehitriny mahagaga ihany raha ny seza no mahamaika ny sasany fa ny vahoaka very asa sy mijaly tsy rarahina mhitsy. Marihina fa Ravalomanana dia efa nanao veloma ny fitondrana tany maputo efa tantara sisa ny azy fa tetezamita isika izao koa inona indray no mbola hitsikafonana ny momba an-dRavalomanana aleo izy aloa haka aina any @ izay misy azy any. Tsipiteny ho an'ireto mpanohana an'i Rajoelina ireto izany.
May volo tratra tokoa matsy ry zalahy ka nanao sonia ny velirano fa tsy maintsy ho maro an'isa hono ao @ ilay fitondrana tetezamita. O leretsy e! Aoka izay ampy izay ny tomobotso ny vahoaka @ izay jerena. Hita taratra t@ ialy fandaharana tosa-kevitra omaly hariva tokoa fa tena manana hetaheta politika ny hifamela tokoa ny firehana telo dia Didier-Zafy-Marc t@ ilay ady hevitra. Niompana betsaka loatra t@ "amnistie" kosa ny firehana TGV!!! hany ka lsa fitodihina ny lasa foana ny ady hevitra fa tsy dia nisy loatra ny tena hevitra @ ny hitondrana ilay tetezamita.
Midika izany fa mbola tsy misy tanjona ny mpanao politika gasy fa mitanisa ny ratsy vita ny teo aloha fotsiny fa tsy mba misy ny fieritreretana ny ho avy. raha izao manokana ohatra ny ny hisorohana ny fahadisona natao ny mpitondra nifandemby taloha no mahamaika ahy ny hiarovana ny fanagonam-pahefana sy ny didin-jadona ary ny fanagonana harena diso tafahoatra. Ny Hananganana repoblika tsaratsara kokoa fa tsy ny oe hiverina sa tsy hiverina ra8 io anjaran'ny vahoaka kosa no mifidy an'io fa tsy tokony ho terena ny olona oe tsy mila an'itsy na izaroa.
Maivamaivana tokoa mantsy ankehitriny ny firehena telo tonta fa tsy ao intsony ireo goaika mpanongam-panjakana sy mpitady seza gaigy lahy rehetra. Mafy ny mahazo an'Ingahy Rajoelina ankehitriny hizara ny toerana ho azy ireo!!! Tsy maintsy misy tsy hahazo toerana mantsy @ ireo ka hitsikafona ho azy eo @ izay ny marina. Mahaiza mifamela hoa na hiongana @ seza ary!lol
[Ankapobeny ] 05 Aogositra, 2009 11:25
Nirotsaka ny fanala sa ranomandry???
Tany Antsirabe izao sary izao fa tsy taiza akory!